Kedu otu esi enweta akara azụ dị mma na azụmahịa ndị okenye?
Uwa weebụ di iche site na di iche iche ya. Ihe di n'ime ya nke a na-etinye ebe a nwere ike imeju ihe obula na ihe uto. Otú ọ dị, ahịa n'ịntanetị nwere ike isi ike na oge kachasị mma ka ọ nwere ike isi ike ịkwalite ndị na-ege ntị. Ndi nwe akwukwo ndi okenye enwere otutu ihe gbasara afo ole na ole gara aga n'ihi mgbasa ozi mgbasa ozi. Ịkwalite ndị toro eto ma ọ bụ na-abanye na ibe weebụ na-esi ike karịa ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị ka ndị ọrụ kachasị na-ahụ ya rụrụ arụ. Otú ọ dị, ọrụ a ka nọgidere na-agbada n'ihi ọkwa ahịa ahịa dị iche iche na njikọta ụlọ. Mkpokọta weebụ ndị okenye nwere ike ịbụ nnukwu isi iyi iji nweta ndị okenye na-agafe na saịtị gị, mgbe ha na-emejuputa naanị usoro nkwado ọkpụkpọ.
Gini mere ndi okenye na-ereghi asọmpi?
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-eche na ihere na-emetụ ha ma ọ bụrụ na saịtị ndị toro eto na-akwalite. Ọ bụ ya mere a na-ewere niche ahịa a dị ka obere asọmpi. Ọtụtụ ndị mmekọ na-agbanye ohere iji nweta ego site na niche a, na-eme ka ọ baa uru karị maka ndị ahịa ahịa nwere ahụmahụ.
I nwekwara ike inwe nkụda mmụọ maka ịkwalite ụdị ndị okenye n'oge mbụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị nweta ego mbụ ị nwetara, ọ ga-adị iche. Ị kwesịrị ịma na enwere ọtụtụ ndị obi ụtọ ịmepụta ọdịnaya maka niche a na-enweghị isi. Ozugbo ị malitere inwe obi ike na mpaghara a, ị ga-achọpụta na ndị okenye enweghi ụdị dị iche iche.
N'ikwu eziokwu, enwere otutu ndi oru ndi nwere mmasị na ndi okenye ma choro ka ha nye ndi oru ma obu oru site na Intanet.Ọ bụ ya mere na ọ gaghị abụ ihe amamihe dị na ya ịhapụ ebe a.
Olee otu esi emepụta ebe nrụọrụ weebụ okenye?
Mgbe ị na-emepụta ebe nrụọrụ weebụ ndị okenye, kama iji ike backlinks, isi ihe bụ iji nye ọdịnaya bara ụba nke ga-adọta ndị ọrụ na saịtị gị.
ọdịnaya vidiyo na mgbasa ozi ọha na eze nwere ike ịba uru maka ụdị ndị okenye ma ọ bụrụ na emee ya n'ụzọ ụzọ. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịmepụta kwa ụbọchị ma ọ bụ posts n'izu ọ bụla ebe ị na-eweta ngwaahịa ọ bụla ma ọ bụ ozi ndị ọzọ ga-adọrọ mmasị ndị ahịa gị. Anaghị m akwado ka ebipụta foto ma ọ bụ vidiyo doro anya ka a ga-ewepụ ha site n'ozuzu ha. Ọzọkwa, ị na-egbu onwe gị iji mebie aha gị dịka onye okenye.
Ọ bụrụ na ị na-amalite ịzụ ahịa gị na niche a, ana m atụ aro ka ị na-elekwasị anya na ịmepụta nnukwu ebe nrụọrụ weebụ, nke nwere ọdịnaya, nke bara uru na nke mara mma. Ịkwesịrị ịnye ndị ọbịa anyị na saịtị ahụ otu ndụmọdụ gbasara isiokwu a, tinyere ụfọdụ ndụmọdụ ndị ị ga-akwado.
Mepụta ike dị na saịtị gị iji nyere ndị ọrụ aka ịnyagharịa ya. Ị nwere ike iji edemede ndị a ịhazi ebe ọdịnaya ị dere ga-apụta.
Ọzọkwa, ọ bụ ihe amamihe dị na inye ndị ọrụ 24/7 nkwado ahịa. Ọ dị mkpa na weebụsaịtị ndị toro eto n'ihi na ndị na - achị ọrụ na - eche na enweghị uche na mpaghara a ma chọọ enyemaka Source .